Waa maxay dhibaatada loo yaqaan 'nitrogen', muxuu beeraleydu uga cabanaayaa maxaase xawaaraha u yaraanaya? : Martin Vrijland
DIRECT (iyada oo aan lahayn PayPal)
Waa maxay dhibaatada loo yaqaan 'nitrogen', muxuu beeraleydu uga cabanaayaa maxaase xawaaraha u yaraanaya?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 7 November 2019	• 11 Comments
Waxay umuuqataa inay tahay karbaash dhab ah! Dhammaan beeraleyda si lama filaan ah waxay u baahan yihiin inay yareeyaan nitrogen. Ereyga 'nitrogen' horeyba wuxuu u leeyahay erayga 'sffocate' laftiisa sidaas darteedna celcelis ahaan ninka wadada jooga wuxuu u maleynayaa inaan wax ka qabanayno walax aan dhamaanteen ku murmeyno. Sababtoo ah qaar badan ayaa sidoo kale weheliya ereyga 'CO2' iyo farqiga lama yaqaan. Nitrogen-ka asal ahaan waa qeyb ka asaasiga ah dabeecadda. Ereyga 'nitrogen' wuxuu haddaba u jeedaa Atom kaas oo kaliya uga dhici kara dabeecadda qaab qaab ahaan ah (sida moleekule ahaan). Taasi waa sababta, sidii beeralley ahaan, sida dhabta ah uma dhimi kartid nitrogen. Waad, tusaale ahaan, yarayn kartaa ammonia. Ammonia NH Ammon runtii waa la qiyaasi karaa oo waxaa laga helaa, tusaale ahaan, meelaha ay ka baxdo lo'da. In gobolku doonayo inuu wax ka qabto yareynta nitrogen wuxuu si cad ugu horrayn yahay NLP (Barnaamijka Luqadda Luqadda ee Neuro) oo loogu talagalay inuu dadka ugu ciyaaro heer hoose. Yaraynta Nitrogenka dhab ahaantii micnaheedu maahan haba yaraatee. Maxaad yareysaa gaaska nitrogen, ammonia of mid ka mid ah walxaha kale ee badan oo ay ku dhacdo maadada loo yaqaan 'nitrogen element'?
Waxaad u badan tahay inaad si fiican ugu garaneyso maadadaas culeyska sareeya ee dhalada ku jira waana inaad ku daadisaa gacmo gashi qaro ah (ama sida sawirka dhalada ku jirta), maxaa yeelay haddii kale farahaadu waxay qaboojinayaan: gaaska nitrogen (N2). Tan waxaa loo isticmaalaa tusaale ahaan si looga saaro burooyinka. Isla markii ay nitrogen ka soo baxdo dhalada cadaadiska sare, waxay bilaabeysaa inay karkariso oo ay ka baxdo. Waxay leedahay heerkul kuleyl ah -195,8 ° C waana heerkulka heerkaas oo nitrogen ay tahay dareere. Gaaska Nitrogen-ka ayaa aad u qabow isla markaaba bilaabay inuu ku shubo hawada furan. Ku haynta cadaadiska sare ee dhalada bir ad adag waxay ka dhigeysaa dheecaan. Taasi waa sharci jireed.
Waxaan hore u ogaynay inaanu yareynay CO2. CO2 wax shaqo ah kuma lahan gaaska nitrogen (N2). CO2 micnaheedu waa carbon dioxide. Marka eraygaas waxaa loo habeeyay sidan: di-oxide wuxuu u taagan yahay oksijiinka '2x'. Atombo kaarboon ah oo leh laba atom oo oksijiin ah ayaa ku lifaaqan. Kaarboon-oksaydhka waxaa laga soo saaraa gubid shidaal ay kujirto atom kaarboon. Gasoline, kerosene iyo naaftada dhammaantood waxay leeyihiin atom kaarboon. Moodeelka shidaalka wuxuu ka kooban yahay, waxyaabo kale, atombo kaarboon iyo, markii hawada lagu gubto (oksijiin ahaan, gaaska O2), CO2 waxaa loo sameeyay gubasho buuxda iyo kaarboon moono-oksaydh (CO) oo ay ku kici karto gubasho aan dhammaystirnayn. Dambe ayaa mararka qaar ku dhaca kuleyliyaha gaaska ee guriga, taas oo keenta in la calaasho. Halkaas waxaad sidoo kale ku arki kartaa isku-xidhka subliminal ee u dhexeeya nitrogen iyo CO2. Farsamo ahaan iyo adduunka dhabta ah, labaduba gabi ahaanba wax xiriir ah kuma leh xiriirkooda.
Haddii beeralayda ay yareeyaan nitrogen, waa inay yareeyaan wax qeexitaankooda aan si buuxda u cadayn. Tani waa sababta oo ah beeralleydu ma soo saaraan gaaska nitrogen. Gaaska Nitrogen-ka waa gaaska ugu badan ee saafi ah waxayna ka kooban tahay 78,1% wadarta guud ee jawiga. Xusuusnow in atom kaliya laga heli karo dabiiciga iyadoo lala xiriirinayo atomooyinka kale. Sida atomka oksijiinta (O) kaliya haddii, tusaale ahaan, gaaska oksijiinka (O2) ama biyo ku dhacdo (H2O). Xeryahooda Nitrogen-ka ayaa had iyo jeer isweydaarsada jawiga iyo noolaha nool. Nitrogen-ka waa in marka hore la warshadeeyo ama "lagu hagaajiyaa" qaab warshad loo isticmaali karo, badiyaa ammonia. Ammonia waa waxa beeraleyda (ugu yaraan xoolahooda) ay soo saaraan. Ameria waa mid faa iido leh oo waxtar u leh dhir, taasina waa sababta beeraleydu u faafiyaan bacriminta dhulkooda.
Marka ammonia ka soo baxo dhirta, waxaa loo isticmaalaa in lagu isku dubo borotiinnada. Dhirtan ayaa markaa dheefshiisa xayawaanka isticmaala xeryahooda 'nitrogen' si ay iskugu dubbaridaan borotiinadooda u gaarka ah iyo qashinka sunta ka kooban ee loo yaqaan 'ammonia' Ugu dambeyntii, noolahaani way dhintaan oo burburayaan, waxay marayaan bakteeriyada iyo sunta oksida deegaanka iyo diidmada, siidaynta gaaska hawo-mareenka ah (N2) oo bilaash ah jawiga. Wareeg cajiib ah oo waxtar leh oo lagama maarmaan ah.
Sida CO2, run ahaantii ma jiraan wax sun ah ama khatar ah oo ku saabsan gaaska nitrogen. Xaqiiqdii, gaaska nitrogen waa gaas 'inert' ah oo dabeecadda aan loo jeedin inay falgal kiimikaad la gasho walxaha kale. Sidaa daraadeed waa wax aan dhib lahayn, aan sun ahayn, ur lahayn oo aan neefsanno maalinta oo dhan; sida oksijiinka oo kale. Ogsijiintaas oo mar kale la soo saaray geedaha taasoo ay sabab u tahay nuugista CO2. Labada CO2 iyo gaaska nitrogen labadaba waa sidaas darteed gaas wanaagsan oo wanaagsan, siyaasaduna hadda (iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa) waxay sheeganayaan inay khatar yihiin. Taasi waa sababta oo ah dowladaha heerar caalami ah waxay uqalmayeen saynisyahano si ay sheekada uga dhigaan mid lagu kalsoonaan karo, iyadoo aan la bixin karin sharrax dabiici ah, kiimiko ama sharrax jireed. Warbixinnada muujinaya inay jirto wax badan oo hawada ku jira oo loo yaqaan 'CO2' hawada inta lagu jiro xilliyada kuleylka ah ee Dhulka, waxay muujineysaa in CO2 ay tahay cawaaqibka firfircoonaanta qorraxda ee aysan aheyn sababta. Waxaan markhaati ka nahay sixirka sayniska si aan u soo bandhigno nidaam canshuureed caalami ah iyo nidaam qof walba qarashkiisa lagu raadin karo (sidaas darteed lacagta blockchain).
Tan iyo 2015, beeraleyda waxaa lagu qabtay barnaamijka PAS (Barnaamijka Nitrogen Approach Program). Waxaan aragnaa mudaaharaadyadii toddobaadyadii u dambeeyay sababtoo ah soo rogeen shuruudaha adag ama aan suurtagal ahayn in la hirgaliyo, taasoo horseedaysa in beeraleydu kharribaan. Xaqiiqda ah in Mark Rutte uu maalin dhaweyd dhageystay beeralleyda (isagoo ku hadlayey dhogorta ka dibna wax aan qabaneynin) wuxuu la mid yahay ka soo saarista gaaska Groningen iyo dhulgariirrada ka dhashay: Markasta iyo ka dib siyaasi ayaa booqda qaybtiisa waxqabadka. oo dadku ha uumiyo uumi. Rutte waxay aadi kartaa kulanka beeralleyda oo kale si kalsooni leh, iyagoo og in gobolka Nederland uu sannado badan ku maalgeliyey shabakad jeebabka xirfad kasta; Shabakad ah 'Inoffizieller Mitarbeiter' oo ah xisbi mucaarad ah oo la xakameeyo qayb kasta oo bulshada ka mid ah. Isaga oo ah jilaa isku magacaabi kara 'ra'iisul wasaare', ma aha inuu ka baqo weerarada dhabta ah, sababta oo ah beeralleyda looga badbaadin doono dhibaato kasta waa laga yaabaa inay sidoo kale ku jiraan kooxdan wayna aamusnaan doonaan.
Sababtoo ah ma qiyaasi kartid qiiqa hawada, haddii aadan laheyn qeexitaan cad oo ku saabsan qofka ama waxa keenaya nitrogen, waxaad dhibaato ku qabtaa. Tusaale ahaan, lo'du miyuu soosaaraa gaaska hawo-mareenka markii uu kaco? Maya, waxaa kujira xarunta kaadida iyo saboolka, laakiin lo'da ma soo saareyso gaaska nitrogen. Gaaska Nitrogen-ka waxaa mararka qaar adeegsada beeraleyda, tusaale ahaan si looga hortago koritaanka hayga ama in lagu keydiyo miro, laakiin taasi wax badan ma dhahdo oo intaas waxaa dheer, gaaska nitrogen waa wax aan dhib lahayn oo gaas wanaagsan. Beeraleyda ayaa markaa ku qasbanaaday inay helaan aaladda xisaabinta, taas oo gobolka ay ugu go'aamisay iyaga kaas oo ay ku sameeyaan wasakhowynta nitrogen. Ugudambeyntiina waxay isu rogtay inay ahaato ammonia oo sidaas daraaddeed waxa ku jira digada iyo kaadida. Nitrogar wali waa eray loo doorto sababaha dacaayadaha iyo barnaamij hoosaadka "inaad nuugto". Maxaysan ahayn wasakhda ammonia Ma sheegtaa oo waligeen ma maqalnaa magaca ina xasuusinaya neefta? Sida lagu sharaxay: taasi waa waxa aan ugu magacdarnay 'barnaamijyada subliminal'.
Qorshayaashii ugu dambeeyay ee ururada jilayaasha The Hague ayaa ah in xawaaraha ugu badan ee wadooyinka la dhimo. Ka dibna waxaa jiray wax kale oo ku saabsan dhismaha? Wali ma heshaa? Sida muuqata waa inay yaraadaan beeraleyda, sababtoo ah waxaan dooneynaa inaan dhisno guryo badan iyo kaabayaal, sidaa darteed xawaaraha waddooyinka waa in la yareeyaa, sababtoo ah gobolka ayaa ku bixin kara dhowr bilyan oo dheeraad ah ganaaxyada taraafikada. Fikrad kasta ayaa ka maqan wadahadal kasta oo u muuqda in ujeedku yahay. Waxaa jira kaliya lagu tuurayo ereyo taabanaya wax aan ka badanayn wax ka badan dareenka sanka (laakiin runtii weli xeebta bari). Maahan wax ku saabsan caqliga iyo waxa ku jira; waxkastoo dunida ka jira ee warbaahinta, siyaasada iyo bay'ada deegaanka waa waxwalba dareenka indhaha. Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira hal saameyn oo taasna waa in qof walbaa inuu lacag badan geliyo ama si fudud (sida beeraleyda) uu kaco.
Shell, waad ogtahay shirkaddaas ay qoyskeenna boqornimada wadaagaan (ka qarsoon yihiin dhammaan dhismayaasha quruxda badan) ee ka bilaabmay xeryahooda Nukliyeerka '2009' si loogu daro shidaalkeeda. Taasi waxay noqon laheyd ka dhigista qiiqa matoorka nadiifinta. Xaqiiqdii, iska soo horjeedku wuxuu u muuqdaa inuu yahay kiiska waxaan dhihi karnaa dhibaatada waxaa ku daray shidaalka shirkadaha shidaalka. Dhibaatada ay xukuumadda Rutte hadda isku dayeyso inay la timaado xal iyada oo loo marayo dhimista xawaaraha ugu badan ee laga bilaabo 130 illaa 100 ee wadooyinka. André L. Boehman (oo hadda noqon doona bogeyman), borofisar ku takhasusay cilmiga shidaalka, sayniska alaabada iyo injineerinka ee Jaamacadda Penn State ee New York, ayaa horay uga warbixiyay 2009 ee New York Times:
Shidaalka Nitrogen-ka-naaqusay ayaa 'la isticmaali jiray in yar'. Wuxuu sheegay in ereyga "nitrogen hodan ku ah" uusan waxba ka oran qofka celceliska ah ee aan ka warqabin kiimikada waxyaabaha lagu daro. Waxa aan isweydiiyo sida khabiir ku ah shidaalka waa: "Maxay ku dartay nitrogen dheeraad ah, maxaa yeelay taasi guud ahaan waxay kordhin doontaa qiiqa loo yaqaan 'NOx'?"
Ku darista xeryahooda ka kooban nitrogen-ka shidaalka ayaa sidaas ah sababta. Xalku waa inuu markaa halkaa laga helo: kuwa shidaalka keena; Waad ogtihiin in balaayiin doolar ay maamusho qoyskaas ku nool daaqadaha oo aan cashuurta ku bixinno khayaanada la yiraahdo dimoqraadiyadda. Si fudud uga saar waxyaabaha waxyaabaha lagu daro ee ah nitrogen-ka!
Tallaabo kasta oo aan hadda aragno dadka ku soo duulaya waa daahir oo waxay ku saleysan yihiin kaliya dareenka riyada ee dacaayadaha ay taageeraan khubaro kireysan Jeroen Pauw iyo barnaamijyada kale ee maareynta TV-ga ee maamulka. Ma jiro dhaleeceyn buuxda ama aasaas asaasi ah oo saynis ah. Hadana waxaa jira dhalleeceyn, faafreebka wuxuu xaqiijinayaa in dadku aysan arkin. Waxay ku saabsan tahay dareenka xiisaha leh, barnaamijyada hoosaadka, iyo jilaayaasha aadka u mushaharka badan, kuwaas oo, iyagoo ereyo dhogorta leh, kugu dhejiya cawska. Fikradayda, baahida nitrogen ee beeraleyda waxay ku tiirsan tahay landjepik, taas oo gobolka uu doonayo inuu ka dhigo mid adag sida ugu macquulsan beeraleyda. Way adagtahay in qaar ay kharribmaan oo derisyadooda beeralleyda ah ay la wareegaan dhulka halka inta soo hartayna ay gobolka u aadi karaan mashaariicda dhismaha iyo kaabayaasha. Xaqiiqda ah in xawaaraha ugu badan uu hoos udhaco waxay u badan tahay inuu ku dambeyn doono bilyan dheeraad ah oo dollar ah (ganaaxyada), kuwaas oo lagu maalgelin karo kaabayaasha cusub iyo mashaariicda dhismaha. Xaqiiqda ah in qaar ka mid ah beeralleyda gala dhalada ayaa gobolka ka dhigaya mid qasan. Beeraleydani si wanaagsan ayey ula dhaqmi karaan sidii addoommo deriskooda ah. Maaha wax ku saabsan deegaanka oo dhan; waxay ku saabsan tahay lacag iyo sharciyeyn dheeraad ah (akhri: kontarool dheeraad ah, dowlad booliis badan) Nederland waxay u tahay meel imtixaan loogu talagalay Yurub inteeda kale iyo adduunka intiisa kale.
Akhri sii wad halkan
Soodhawrka xiriiriya: nytimes.com
Beeraleyda Beeraleyda: Beeraleyda ayaa fiiro gaar ah u leh in hogaamiyaashaada mudaaharaada aysan aheyn kuwo iskuceliya wakiilka dowlada
Ardayda muujinaya cimilada Hague ayaa ku filan
Warbaahintu ma la shaqeysaa qorayaasha qoraallada iyo inay iibiyaan hawlgallada PsyOp iyagoo la socda bandhigyada TVga?
Caddeyn in website-yada warbaahineed ee kale ay mucaarad yihiin
Robert Jensen iyo Jensen.nl istaraatiijiyada nabadgelyada ee Infowars ee Nederland?
Tags: 100%, 130, Dariiqa, ammonia, Beeraleyda, CO2, featured, ugu badnaan, Nederlandse, PAS, barnaamij, dibad baxyo, xawaare, wadooyinka waaweyn, nitrogen
About the Author (Profile Author)
URL soo noqoshada | Faallooyin RSS Feed
Matthijs van den Brink ayaa qoray:
7 November 2019 ee 14: 13
"Caafimaadku si wanaagsan ayuu u koray oo waa guduud," beeralaydu waxay yiraahdeen, sidaa darteed ma jiraan (sida muuqata) nitrogen badan. Kuwaasoo soo jeedinaya inay sidoo kale jiri karaan hawo badan. Mise tan ayaa u sabab ah acid ee ciidda ay sabab u tahay ammonia aad u badan? Oo aan aad u badan nitrogen? Laakiin markaa sidoo kale faafinta joogtada ah ee digada ma fiicna. Markaa miyaysan micno lahayn (xitaa haddii ereyga loo yaqaan 'nitrogen' uu khaldan yahay)?
Gali si aad uga jawaabto
Martin Vrijland ayaa qoray:
7 November 2019 ee 14: 23
Ammonia laftiisu maahan acidic, laakiin aasaasiga ah; ie waxay ka takhalustaa aashitada.
Ereyga loo yaqaan 'nitrogen' waxaa lagu sharaxay maqaalka waxbana kuma lahan waxa ay lo'da ku haysato banaanka, marka laga reebo tan atomka-ka loo yaqaan 'nitrogen atom' uu yahay qayb ka mid ah ammonia. Ammonia waxtar ayey u leedahay uguna wanaagsan tahay dhirta.
Dabcan waad dhihi kartaa in waxkasta oo dhaha 'aad u badan' ma fiicna, laakiin ajandaha siyaasadeed waxay umuuqdaan inay badanaa ku saabsan yihiin lacagta iyo lahaanshaha dhulka (ama iska qaadida), oo shuruudaha deegaankaani yihiin kuwo shisheeye.
7 November 2019 ee 14: 31
Sheekada ayaa ah in Nederland ay leedahay lo 'aad u fara badan sidaa darteedna ay ku badan tahay digada iyo qiiqa ammonia. Haddii tani degto dhulka markaas dhirta jecel carrada saboolka ah - oo aan ka baaraandeyn karin nitrogen badan - way ku xanuunsadaan. Dhirta ku haysa carradu hodanka ku ah nitrogen, sida cawska iyo maraboob, ayaa gacanta sare hela.
Taasi waa khudbadda rasmiga ah ... waxay xasuus u tahay cillad "acid roob" dhawr sano ka hor. "Dhirta jecel carrada saboolka ah ...", "dhirta khatarta ku jirta" .. Haa haa .. Mar labaad waxaan aragnaa erayga nitrogen iyo carrada hodanka ah ee nitrogen-ka. Ereyga 'nitrogen' weli waa mid aan cadaalad ahayn. Nitrogen-ka kaliya wuxuu ku dhacaa xeryaha sida lagu sheegay sawirka maqaalka.
Waxaan dhahay: waxay ku saabsan tahay lacag, xeerar badan iyo qabashada dhul
7 November 2019 ee 15: 26
Marka akhrinta rasmiga ahi waa ammonia inay ku xumaato dhirta qaar kaydka dabeecadaha qaarkood.
Waxay shaki la'aan noqon doontaa in wax aad u badan aysan fiicneyn, laakiin waxay umuuqataa inay u egtahay burburinta xannaanaynta xoolaha ee Nederland. Degaan ahaan sidii shisheeye oo kale si looga helo lacag badan dadka.
Waxay noqon kartaa waxoogaa yar, laakiin waxay umuuqataa inay badanaa ku saabsantahay soo bandhigida iyo caadeysiga nidaamyada xakamaynta guud iyo lacagta.
Waxaan sidoo kale aragnay habka si fiican loo yaqaan ee 'saynisyahano ka soo horjeedda muxaadarooyinka rasmiga ah oo hela dhiirrigelin iyo kuwa kale oo u oggolaanaya sheekada inay helaan dhiirrigelin' sheekada CO2. Su'aashu waxay tahay tani tani sidoo kale waa halkaan.
7 November 2019 ee 15: 52
Soo rogaalista dhimista qiiqa ammoina waa talaabo yar oo loo qaaday yareynta cunista hilibka. Sideed u hubinaysaa inta hilib dadku iibsadaan waxna cunaan? Via 'internetka ee waxyaabaha' (5G) iyo isticmaalka la raad raacan karo. Taasi waxay u baahan tahay nidaam lacageed ku saleysan 'blockchain' iyo waxyaabo sida mitirka caqliga leh ee guriga (qaboojiyaha si loo cabbiro waxa gala, musqusha caqliga leh si loo cabbiro waxa ka baxa).
"Nitrogen" alibi, oo ay weheliso haybadda 'CO2 hype', sidaas darteed waa hab aad u wanaagsan oo lagu soo bandhigi karo nidaamyada xakamaynta guud.
SalmonInClick ayaa qoray:
7 November 2019 ee 19: 34
Iyo haddii qof beeraley ah markaa la yimaado xalal, ka dib taasi waa macquul inay joogsato, maxaa yeelay kuma haboona ajandaha 2030 ee adduunka. Xayiraadda xorriyadda iyo gelitaanka geedaha sida addoonka oo kale ..
7 November 2019 ee 20: 04
Xalka quruxda badan. Mar ayaan bilaabay ganacsi jumlo ee zeolites waxaanan ahaa kii ugu horreeyay ee keena alaabtan Yurub ka soo qaada macdanta laga soo qaado Turkiga iyo Australia. Nasiib darrose, waqti cayiman iibsade weyn ma uusan bixin biilalka, sidaa darteed anigu uma badbaadin karo shirkadda. Milkiilaha cusub ee ka iibsaday kicinta ayaa leh dhammaan qoraalladii aniga iga qortay waqtigaas oo weli ku yaal websaydhka. Midda ugu fiican hadda waa milyaneer waana iga mahadcelisay dhammaan shaqada taleefoonka.
Zeolite, iyo gaar ahaan Clinoptilolite, waxay ka miireysaa ammonia dhibcaha waxayna dib u soo cusbooneysiineysaa qubeyska milixda. Clinoptilolite-ka aan keenay ayaa sidoo kale Midowga Yurub u ansixiyay in lagu daro cuntada. Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay ee keenaya beeraha fardaha iyo guryaha digaagga waaweyn (ordaya).
Xal kale oo shaqeeya. Laakiin dadku ma rabaan xallinta, waxay rabaan inay jebiyaan warshadaha oo ay si fiican u qabsadaan.
7 November 2019 ee 23: 07
Martin sharraxaaddaada wax badan ayey sharxaysaa, waxkastoo ku yaal Madurodam iyo hareeraheeda waxaa ku hoos jira khasaaro luciferian ah.
Danny ayaa qoray:
7 November 2019 ee 21: 14
Sidoo kale ogsoonow in boobku ku bilaabmay "xukunka nitrogen" ee ka socda golaha gobolka.
Naadiga uu Willen-Alexander madax ka yahay.
Marka waa iska cadahay kiiskee dhibaatadu ka imaanaysaa.
Sunshine ayaa qoray:
8 November 2019 ee 12: 17
Wax kasta, gaar ahaan waxyaabaha muhiimka u ah wiilasha qoraalka ku jira, waxaa loo hayaa dhammaystir. Sidaa darteed macno malahan in maxkamad la aado 'maxkamadahooda'.
Ma fahmin in beeraleyda, adduunka dhismaha, iwm aysan wada shaqeyn? Khatarta ayaa weli ah in ururada doonaya wax qoto dheer, oo qoto dheer, ay ku dhexjiraan dhowr qarsoon. Wadankee. Nasiib wanaagse waxaan ku nool nahay 'qaanuunka sharciga'.
7 November 2019 ee 23: 31
Wargeyskii ugu weynaa dacaayad ee Nederlaanka ayaa laga yaabaa inuu hadda bilaabo inuu sameeyo xakameyn waxyeelo, oo hadda ay caddaato (maxaa yeelay cabiridda ayaa og, xog ballaaran) oo ah inaysan dadku qaadin.
(xor u ah inaad wax ku akhrideyso qaab qarsoodi ah, laakiin aan fiicnayn inaad u aragto micno darro)
Dadku waxay sii wadaan ka hadalka nitrogen, laakiin maahan wax ku saabsan nitrogen. Taasi waa magac dacaayad, si aad u siiso dareenka ah in aad calaacalaysid!
Leave a Reply baajiso reply
Waa inaad gal gudaha si ay u awoodaan inay soo dhejiyaan faallo.
« Qareenka toogashada Philippe Schol iyo warbixinta afduubka been abuurka ah ee Schiphol
Sideed ugu qasbi kartaa dowladaha inay beddelaan iyagoo iska indho tiraya tirada guud? »
Soo booqdayaasha bishii July 2017
Guud ahaan Wadarta: 13.808.316
Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo
Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.
Marqaatiga taajirka ah iyo ciyaarta udhaxeysa gobolka iyo dambiyada wakiilada (qareenka Meijering iyo Plasman)
Tallaabada koowaad waa calaamadaynta, tallaabada labaad waa ka saaritaan: badhanka tallaalka
Sideed ugu qasbi kartaa dowladaha inay beddelaan iyagoo iska indho tiraya tirada guud?
Danny op Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo
Mindsupply op Robert Jensen "Donald Trump ma rumeysan yahay Amarka Dunida cusub" wuxuu cadeynayaa: Jensen.nl waa mucaarad la xakameeyo
Sunshine op Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.
Marga op Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.
SalmonInClick op Weeraradu miyey bilaabeen? Psycholance waxaa horey loo siiyay iftiinka cagaaran ee 2018 iyadoo lagu saleynayo kiiska Els Borst / Bart van U.
Cusboonaysiinta maalinlaha ah ee e-mail
Ku biir 1.682 macaamiisha kale
© 2019 Martin Vrijland. All rights reserved Theme by Solostream.